एक दिगो आहार को कुञ्जी | बेजिया
मारिया vazquez | 03/07/2021 10:00 | अद्यावधिक गरियो 30/06/2021 19:57 | समाचार
हामीले आफ्नो खाना र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा सिक्यौं। यद्यपि हामी अझै पूर्ण रूपमा सचेत छैनौं हाम्रो खाने तरिकाले हाम्रो वातावरणलाई पनि असर गर्दछ। खाद्य उत्पादन, वास्तवमा, ग्रहहरूमा वास र जैव विविधताको क्षतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभावको साथ एक कारक हो।
अनुहार वातावरणीय चिन्ता खानाको उत्पादन र खपत संग सम्बन्धित सबैको व्यवसाय हो। तर खानालाई दिगो बनाउन हामी के गर्न सक्दछौं? केहि साधारण इशाराहरू जस्तै हाम्रो मेनूमा अधिक नजिकका फलहरू र तरकारीहरू समावेश गरेर र रातो र प्रशोधन गरिएको मासुको खपत मध्यम गर्नु राम्रो शुरुआत हो। तर यी केवल छैनन् दिगो आहारको लागि कुञ्जीहरू।
1 खानाको वातावरणीय प्रभावको मूल्या .्कन गर्नुहोस्
2 मासुको खपत कम गर्नुहोस्
3 बोटबिरुवाको खानाको उपभोग बढाउनुहोस्
4 स्थानीय उत्पादनमा अस्थायी र शर्तको सम्मान गर्नुहोस्
5 खाना योजना
खानाको वातावरणीय प्रभावको मूल्या .्कन गर्नुहोस्
खाना हुनै पर्छ उत्पादन, संसाधित र ढुवानी गरियो। ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन बढाउन योगदान दिने प्रक्रियाहरू। कृषि वास्तवमा कुल उत्सर्जनको एक तिहाइको लागि जिम्मेवार छ, के तपाईंलाई यस बारे थाहा छ?
२०१ 2018 मा विज्ञानमा प्रकाशित एक अध्ययनले जनावर उत्पादन, जस्तै मासु, दुग्ध र खेती गरिएको माछा जस्ता सबै उत्पादन गर्‍यो भनेर पत्ता लगायो। वातावरणमा उत्सर्जन प्रदूषण। यस अध्ययनले सोयाबीनको खेती पनि उल्लेख गरेको छ र यसमा माटोको गिरावट, नदी र जलजल प्रदूषण र वन फँडानी पनि जोडिएको छ।
फरक तपाईंको उत्पादन श्रृंखला को चरजस्तै, पानी, माटो र उत्सर्जनको प्रयोगसँग सम्बन्धितहरूले उत्पादकत्वमा मात्र नभई वातावरणमा पार्ने प्रभावमा पनि जानकारी प्रदान गर्दछ। यी र अन्य भेरियबलबाट बिभिन्न ग्राफहरू विकास गरिएको छ जसले हामीलाई एक हेराईमा थाहा पाउन दिन्छ कि कुन खानाहरू सबैभन्दा हानिकारक हुन्छन् र जसलाई हामी सबैले एक नजर राख्नु पर्छ।
मासुको खपत कम गर्नुहोस्
प्रोफेनको खपत स्पेनमा कम गरिएको छ, जे होस् हामी डब्ल्यूएचओ भन्दा बढी प्रोटीन खान्छौं: .52,5२. grams ग्राम प्रति दिन, healthy० किलोग्राम स्वस्थ वयस्कको लागि। थप रूपमा, consume०% प्रोटेनहरू हामी खान्छौं जनावरको उत्पत्तिका हुन्छन्, रातो मासुसँग प्रासंगिक भूमिका हुन्छ।
एक स्वास्थ्यले दुबै स्वास्थ्य र वातावरणलाई असर गर्छ, किनकि मासु वरपरका लागि जिम्मेवार छ Carbon०% कार्बन पदचिह्न परिवारको। के यो पछाडि काट्नु राम्रो कारण होइन? राम्रो तरीकाले सुरूवात गर्नु भनेको "मांसविहीन सोमबार" आन्दोलनमा आफैलाई प्रतिबद्ध गर्नु हो जसले तपाईंलाई बोटबिरुवाको खानाको उपभोग बढाउन बाध्य पार्छ।
बोटबिरुवाको खानाको उपभोग बढाउनुहोस्
मासुको खपत कम गर्नाले बोटमा आधारित फूडहरूको खपतमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ। तरकारीलाई तारांकित गर्ने भूमिका दिनुहोस् र उनीहरूको पक्ष मात्र सोच्न रोक्नुहोस् वा गार्निश अधिक दिगो आहारको लागि महत्वपूर्ण छ।
फलफूल, तरकारीहरू, फलफूलहरू ... बिभिन्न किसिमले तिनीहरूलाई पकाउन सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। पकाइएको, स्टीम्ड, ग्रील्ड वा बेक्ड ... तपाईं तिनीहरूलाई सलाद, क्रीम, स्ट्यू, इम्पानडस, स्प्रेडहरूमा समाहित गर्न सक्नुहुनेछ ... यो सम्भावनाहरूको कारणले हुने छैन!
स्थानीय उत्पादनमा अस्थायी र शर्तको सम्मान गर्नुहोस्
जब हामी मौसमी र ​​स्थानीय रूपमा उत्पादन फल र तरकारीहरू उपभोग गर्छौं टाढाको यातायात जोगिदै, जो वातावरण को देखभाल को पक्षमा छ। यी उत्पादनहरूको छनौटले तिनीहरूको स collection्कलन र उनीहरूको उपभोगको बीचमा हुने समयलाई कम गर्दछ र फलस्वरूप यसबाट व्युत्पन्न स्रोतहरूको खपत।
खानाको लागि योजना बनाउने र किनमेल गर्ने समय घटाउनुका साथै खाना पकाउने योजनाले हाम्रो स्वास्थ्य र वातावरण दुबैमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तिनीहरूलाई पानामा राख्दा हामीलाई सन्तुलित मेनू सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ, जस्तै टाइमिंगमा ध्यान दिन। थप रूपमा, हामीलाई कुन सामग्रीहरू चाहिन्छ र कुन मात्रामा हुन्छन् भन्ने कुराले हामीलाई अनिवार्य रूपमा खरीद गर्नबाट रोक्छ हामीले खानालाई खेर फाल्यौं।
हामीले खाने तरिकाले वातावरणलाई असर गर्छ, हामी के खान्छौं भन्ने बारे अझ सचेत भएर हामी लड्न सक्ने कुरा; हामी आज प्रस्ताव राख्ने एक टिकाऊ आहारमा कुञ्जीहरू लागू गर्दै। के तपाईं यो गर्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » दिगो आहारको लागि कुञ्जीहरू
फ्याट जलिरहेको सूप